Semalt Inogovana Nzira Yakanakisisa Yokudhura Dhepa Kubva paIndaneti
Octoparse inobatsira uye ine simba . Inogona kukwanise uye kusvitsa dhigirii yako yedhigiriro yekuita kune imwe inotevera. Octoparse inouya zvose zviri pachena uye yakabhadharwa. Neshanduro yaro isina mahara, unogona kutora mapeji mazana mapeji ane zviuru zvishanu nokukurumidza.
Octoperse inounganidza uye inoparadza data kubva paInternet uye inosvika 150 000 vashandisi munyika yose - corn grain storage. Kubva muna 2014, Octoparse iri kupa huwandu hwehuwandu hwemashoko ehurumende uye inoedza kuvandudza chero kupi zvako kwaidiwa.
Dhiyabhorosi inowanzowanika paInternet mune fomu isina kugadziriswa. NaOctoparse, haugoni kungotsvaga data yako chete asiwo anogona kuronga zvakanaka. Mashoko akawanikwa anogona kuchinjwa kuti ave ruzivo rwakakosha, nokuda kwaOctoparse pakuita kuti zvive nyore. Zvimwe zvezvinhu zvakasiyana-siyana zvinotaurwa pasi apa.
1. Zvakanaka kune vasiri mapurogiramu
Octoparse inoita kuti zvive nyore kwauri kuti ubvise zvinyorwa kubva paIndaneti pasina unyanzvi hwekugadzirira. Ichi chishandiso chakakodzera kune vose vasiri coders uye vasina-programm uye inotsvaga zvinyorwa zvewebhu kubva pane zvose zvirikuita uye zvitsuwa zvemashoko. Uyezve, inotibvumira kuchengetedza dhidhiyo mune fomu yakachena, yakarongwa. NaOctoparse, unogona kuchinja nyore nyore data mumutambo APIs uye kuwana mhinduro inoda.
2. Octoparse se cloud service:
Octoparse is cloud-based platform iyo inotora mapeji akawanda webhupu muawa uye inoita kuti uwane migumisiro, kuchengetedza nguva yako nesimba. Iwe haufaniri kunetseka pamusoro pezvikwereti zve hardware nokuti chigadzirwa ichi hachidi chero kuchengetedza uye chinogona kuita basa racho nguva dzose.
3. Chengetedza mitengo neChipfuura:
Chimwe chezvinhu zvakasiyana-siyana zvePorparse ndechokuti inokubatsira kutarisa mitengo uye kuenzanisa nemitengo yakasiyana. Iyo yakakodzera kutenga mabhizimusi e-Amazon neBay uye inowana data kubva kunowanikwa muchengeti yako nzvimbo nyore nyore. Mukuwedzera, chigadzirwa ichi chinokanganisa data chaiyo-nguva nekamwe chete kuchitsvaga uye inochengetedza nguva yakawanda.
4. Itai kuti vatungamirire:
NaOctoparse, unogona kuunza mutungamiri uye kuvaka yako rutsva rwekutengesa mukati memasekondi. Iwe haunoda chero ruzivo rweprogram nokuti Octoparse ichachera huwandu hukuru hwe data pakarepo. Ichakubatsira iwe kukurudzira kana kuzivisa marashi yako nenzira iri nani. NeOporparse, unogona kuvandudza mararamiro ako ekutengesa uye unogona kuita zvisarudzo zviri nani nekufanotaura.
5. Zvakanaka kuvadzidzi nevadzidzisi:
Vadzidzi nevadzidzisi vanogara vachida dheta rakarurama kuti vashandise tsvakurudzo yavo. Iwe naOctoparse, unogona kuparadzira mapeji akawanda ewebhu kana zvichikwanisika uye unogona kuwana ruzivo kubva ku ebooks nemagazini nyore nyore. Ichakubatsira kuti uwane dhiyabhorosi uye inogona kuwanikwa pasina nguva.
Octoperse inozivikanwa zvikuru neyo-point-and-click interface. Iyo yakagadzirwa nemichina yakadzidza inyanzvi yekombiyuta inotora uye inoparadzanisa dambudziko nemangwanani mashomanana. Iwe unongoda kujekesa data yaunoda kuparadzira kana kuisa URL yewebsite uye rega Octoparse ita basa rayo. Ichaita basa rose rakavhiringidza shure kwekona.
7. Inobvumirana nemarudzi ose emawebsite: